Buy မျက်နာသစ် ဆပ်ပြာ in ရန်ကုန် (5,500 Ks) on ipivi
ဒိဆပ်ပြာလေးကြောင့် ဖြူစင်းဝင်ပတဲ့ လှတမျက်နာလေးကို ပြန်ပိုင်ဆိုင်ရမှာနော်
3တုံးယူ ပို့ခ free
ကိုယ်တိုင်သူံး မို့တကယ်ကောင်းတာ အာမခံ
အနံလေးကလဲ တကယ် စွဲဆောင်မူရှိတော့ မသုံးပဲမနေနိုင်တော့ဘူး ကိုယ်ရောင်းနေတာလေး တကယ်ကောင်းမကောင်းလဲဝယ်သူကိုသေချပြောနိင်အောင် စမ်းသုံးကြည့်ထားတော့ ဝိုးးးးတကယ်ကောင်းလွန်းလို့ ဘယ်လိုပြောရမှန်းကိုမသိတော့ဘူး မျက်နာလေး ဝင်းအိသွားတာပဲ ကြိုက်လွန်းလို့တနေ့ထဲ ၃ ခါ မျက်နာသစ်လိုက်တယ်
ဝက်ခြံ အမဲစက် နေလောင် အသားရေမညီညာမူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး မျက်နာသစ်ဆပ်ပြာ
ZORA Premium snail 🐌 soap
For face 💁🏻‍♀️
Made in : Thailand 🇹🇭
Retail price လက်လီဈေး 5500
ချစ်တို့ရေ Zora snail 🐌 soap လေး Thailand
ဒီဆပ်ပြာလေးကတော့ မျက်နှာအတွက် premium အကောင်းဆုံး အရည်အသွေး အမြင့်ဆုံး သီးသန့်ထုတ်ထားတဲ့ဆပ်ပြာလေးပါနော် 🌸
1🐌. snail extra Gold ရွှေမှုန်ပါဝင်လို့ မျက်နှာဖြူကြည်လင်စေပါတယ် တစ်ခါမျက်နှာသစ်ပြီးတိုင်း ရွှေသွင်းလိုက်တဲ့ effect ကိုရရှိစေပါတယ် 🌸
2🐌. Marine Collagen ကြောင့် မျက်နှာသစ်ပြီးတာနှင့် မျက်နှာ တင်းရင်းပြီး အရေးကြောင်းများလျှော့ပါသွားစေပါတယ် 🌸🌸🌸
3🐌. Ginseng Expect ပါဝင်သောကြောင့် မျက်နှာမှာရှိတဲ့ ဝက်ခြံ , စားဝက်ခြံ , အမဲစက် တင်းတ်ိတ်တွေကို လျှော့ပါးပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိပါတယ် 🌸🌸🌸
4🐌. Wild Honey 🍯 ပါဝင်လို့ မျက်နှာအသားအရေကို နုဖတ် အိညက်စေခြင်း ချွေးပေါက်နှင့် အသားအရေ မညီ မညာ ဖြစ်နေသော သူတွေအတွက်ပါ အဓိက သိသာကောင်းမွန်ပြီး အိစို နုဖတ်တဲ့ baby တွေလို အသားအရေကို ရရှိစေပါတယ် 🌸🌸🌸
5🐌. Coconut 🥥 Oil , Olive oil , Allantoin ,propylene Glycol ပါဝင်လို့ မျက်နှာအတွက် လိုအပ်တဲ့ အစိုဓာတ်ထိန်းသိမ်း ခြင်းနှင့် ခြောက်သွေ့ကြမ်းတမ်းကို ဟန့်တားပေးစေပါတယ် တင်းတိတ်နှင့်မှဲ့ခြောက်ကို ပုံမှန်သုံစွဲပါက ပျောက်ကင်းသည်အထိ အစွမ်းထက်ပါတယ်🌸🌸🌸
6🐌 . Vitamin E , Vitamin B3 ပါဝင်လို့ မျက်နှာအတွက်အဓိကလိုအပ်နေတဲ့ အဟာရကို ဖြည့်တင်းပေးပြီး အသားအရေ စိုပြေ နုညံ့ခြင်း အိစက်ခြင်း ဖြူခြင်းအကြိုးကို ခံစားရမှာပါရှင့်
🌸🌸🌸အားလုံးခြုံပြီးပြောရရင်တော့ #တင်းတိတ် #အမဲစက် ' #ဝက်ခြံပျောက် , #မျက်နှာဖြူစေတဲ့ ဆပ်ပြာလေးပါ 🌸🌸🌸
မြန်မာ ထိုင်း fda ရရှိထားပြီးပါ